Gamsei Is Biirsaday - Joornaalka Naqshadeynta
Is Biirsaday Markii Gamsei la furay 2013, hyper-localism-ka waxaa lagu soo kordhiyay goob ku tababarasho oo markaas ilaa inta badan lagu xaddiday goobta cuntada. Gamsei, maaddooyinka loo yaqaan 'is biirsaday' waxaa si xun u xanaaqay ama ku beeray beeraleyda artesian ee maxalliga ah. Barxada gudaheeda, waa horumarsan cad ee falsafadan. Si la mid ah is biirsaday, Buero Wagner wuxuu iibsaday dhammaan agabyada gudaha, wuxuuna si dhaw ula shaqeeyey soosaarayaasha maxalliga ah si loo soo saaro xalal caabbiyay. Gamsei waa fikir isku dhafan oo isu beddelaya dhacdada khamri is biirsaday khibrad cusub.
Magaca mashruuca : Gamsei, Magaca naqshadeeyayaasha : BUERO WAGNER, Magaca macmiilka : Trink Tank.
Is Biirsaday BUERO WAGNER Gamsei